Ny Tim ihany no tratry ny antsojay : nandihizan’ny HVM sy Rakotovao Rivo i Mahajanga | NewsMada
Ny Tim ihany no tratry ny antsojay : nandihizan’ny HVM sy Rakotovao Rivo i Mahajanga
Nitranga ny nampoizina amin’ny mizana tsindrin’ila eto amin’ny firenena. Namory vahoaka nanoloana ny lapan’ny Tanànan’i Mahajanga ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo sy ny HVM, ny asabotsy teo. Tsy nisy fanakanana nataon’ny Emmo/Reg izany hetsika izany.
Fotoana nampahafantarana sy niarahabana ity filoha vaovaon’ny andrimpanjakana etsy Anosikely ity, izao natao tany an-toerana izao. Vory maro ny vahoaka ary rakotra olona ny manodidina. Noferana ny lalana nizoran’ny fiara ary navily lalana izy ireny ka voaelingelina ny fifamoivoizana satria tonga ny lehibe. Ankoatra ny kabary nifandimbiasana sy nisehosehoana ary ny fampanantenana mahazatra, nanafana ny lanonana teny an-tsehatra ireo mpanakanto maro any an-toerana. Anisan’ny nahavory ny olona rahateo ny fijerena fety tsy andoavam-bola.
Nanaovana pimaso ny vahoakan’i Mahajanga
Nanaovana pimaso amin’ny vahoakan’i Mahajanga koa ka ilazana fa misolo ny toeran’ny loholona teo aloha, Ahmad, lasa filohan’ny Caf ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo izao hetsika izao. Hadinon’ny mpitondra anefa fa anisan’ny nanendrena io filohan’ny federasion’ny baolina kitra teo aloha io ho loholona ny maha silamo sy Sakalava ny tenany. Nosarontsaronana amin’ny kabary tsara lahatra sy fety izany tao Mahajanga…
Araka izany, tsy mazava intsony ny tian’ny mpitondra hahatongavana. Rehefa iza sy inona no afaka mamory vahoaka an-dalambe sy omena alalana hanao izany ?
Nosakanana amin’ny fomba rehetra ny Tim
“Mazava izany izao fa afaka manao hetsika sy fety ary lanonana eny an-dalambe ny tompom-pahefana, rehefa nahazo seza miaraka amin’ny antokon’ny fitondrana HVM”, hoy ny depiote Randrianarisoa Guy Rivo ao amin’ny tranonkalam-pifandraisana, omaly.
Tsiahivina fa tratry ny antsojay sy nosakanana tamin’ny fomba rehetra ny antoko Tim raha nikasa ny hanamarika ny faha-15 taona nijoroany ny volana jolay teo, ho an’ny teto Antananarivo sy ny tany Toamasina. Nampiakatra ny raharaha teny amin ‘ny fitsarana mihitsy izy ireo ary nandresy, saingy tsy nampiharina izany didim-pitsarana izany.